Ahoana ny fomba hahazoana Adobe Photoshop CS2 maimaim-poana sy ara-dalàna
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Photoshop CS2 maimaim-poana
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-06-26, Malagasy Blog
Raha tsy fantatrao hoe aiza no télécharger sy ny fomba fampiasana araka ny tokony ho izy ny kinova ara-dalàna amin'ny Photoshop CS2 maimaim-poana, ny lahatsoratra dia ho tena manampy. Hiresaka momba ireo safidy maimaim-poana maro amin'ny Photoshop ihany koa aho ary hamaly fanontaniana matetika momba ny Ps sy Adobe Creative Cloud andrana maimaim-poana.
Tombontsoa amin'ny Photoshop CS2
Mitadiava sary an-tsary fa tsy amin'ny anaran-drakitra
Fanalana vovoka, rangotra, tasy ary ketrona
Ny mangarahara amin'ny Internet dia mamela anao hamerina ny loko ho mangarahara, hanova ny mangarahara
Rollover palette - ho an'ny famoronana, fijerena ary fanitsiana ny toetry ny fihodinana
Aiza no ahafahako misintona kinova Photoshop andrana?
Noho ny maha-mpikambana Creative Cloud maimaim-poana, azonao atao ny misintona kinova maimaim-poana Photoshop. Raha te hahazo ny programa rehetra ianao dia azonao atao ny misintona ny kinova feno amin'ny programa Creative Cloud tsirairay.
Afaka manavao avy amin'ny dikan-teny maimaim-poana ho amin'ny karama ve aho?
Raha angatahana ianao hampiditra ny mombamomba anao amin'ny banky alohan'ny hisintonana Photoshop, ny dikan-teny maimaim-poana dia hovana ho karamaina avy hatrany aorian'ny fiafaran'ny fotoam-pitsarana. Azonao atao ihany koa ny mividy famandrihana avy hatrany amin'ny tranokala ofisialin'ny Creative Cloud.
Ohatrinona ny vidin'ny version Photoshop CS2 feno?
Adobe Photoshop CS2 dia tsy tohanan'ny mpamorona intsony. Saingy azonao atao ny misintona ny kinova farany Photoshop 23.1 amin'ny .99 isam-bolana. Rehefa avy nividy ny programa ianao dia afaka mampiasa ny endri-javatra rehetra ary mahazo fanavaozana.
Eny, ny version trial Photoshop CS2 dia miasa tsara amin'ny Windows 10* (64-Bit) na Windows 7 (64-Bit), ary koa amin'ny macOS 10.15, 10.14 na OS 10.13.
Photoshop CS2 Pirated Version
Amin'izao fotoana izao, feno rohy fampidinana maimaim-poana ny rindrambaiko Adobe Photoshop CS2 "ofisialy". Na izany aza, tokony ho fantatrao fa ny fampidinana, fametrahana ary fampiasana pirated Photoshop ho an'ny Mac ary ny Windows dia mety hitondra olana lehibe amin'ny solosainao sy anao manokana. Izany no antony, ho an'ny workflow azo itokisana sy kalitao, manoro hevitra anao aho hampiasa ny dikan-teny nahazoan-dàlana amin'ny programa ary misintona azy amin'ny pejy ofisialy Adobe.
Fahafahana mahazo rindrambaiko miaraka amin'ny bibikely
Raha miasa amin'ny Adobe Photoshop CS2 piraty maimaim-poana ianao, dia ho tojo bibikely maromaro ianao. Mety hianjera ny fandaharana, ho atao miadana ny fampandehanana. Ary koa, rehefa miatrika kinova Ps voajirika ianao, dia tsy hahazo fanavaozana ary hijanona amin'ny dikan-teny mitovy foana ianao nefa tsy afaka manavao.
Rehefa misintona Photoshop CS2 feno ianao, dia mety ho voan'ny viriosy sy programa ratsy isan-karazany ny solosainao. Ireo viriosy sy programa ireo dia mety hiteraka voka-dratsy samihafa ary ho sarotra ny manala azy ireo. Ny fiasana amin'ny logiciel dia ho lasa olana ary hitarika ho amin'ny fanamainana ny solosaina. Ankoatra izany, mety hanimba ireo rakitra manan-danja miaraka amin'ny viriosy izay tsy maintsy hiditra ao amin'ny solosainao ianao aorian'ny fametrahana rindrambaiko simba na mampiasa Photoshop installer piraty.
Misintona Photoshop CS2 maimaim-poana amin'ny torrents sy loharano hafa mampiahiahy, mandika ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona ianao. Vokatr'izany dia mety hahazo onitra ara-bola ianao, na mety hatolotra ny fitsarana noho izany. Fa kosa, azonao atao ny mampiasa Photoshop trial version, andramo ny endri-javatra amin'ny programa ary raha mahafa-po anao izy ireo dia mividy ny rindrambaiko nahazoan-dalana.
Photoshop CS2 Alternatives Maimaim-poana
Noho ny antony sasany, mety tsy afaka mahazo Photoshop CS2 maimaim-poana ianao. Amin'ity tranga ity, manoro hevitra anao aho mba handinika ireo safidy atolotra etsy ambany.
MAMPISEFA PAINTNET MAIMAIMPOANA
Fanitsiana loko lalina
Fitaovana maro ho an'ny sary nomerika fototra
Tsy manohana ny Linux
PaintNet dia programa ho an'ny sary nomerika ary safidy maimaim-poana amin'ny Photoshop. Miaraka amin'ny fanampiany dia azonao atao ny maka tahaka ny teknika fanaovana sary rehetra, toy ny loko rano, menaka, sary hosodoko acryl sy ny hafa. Ny vokatra dia mandeha amin'ny sehatra macOS sy Windows ary mety ho safidy tsara ho an'ny mpanakanto nomerika matihanina, izay miasa amin'ny sehatry ny sary hosodoko nomerika, fanoharana ary sary.
AMPIASAO SUMOPAINT MAIMAIMPOANA
Mety amin'ny fanovana sary fototra
Miasa amin'ny rakitra RAW
Tsotra interface tsara sy fitaovana
Ratsy ny fanatsarana
Mitaky fanatsarana ny fitaovana sasany
SumoPaint dia safidy Photoshop maimaim-poana izay tsy sarotra fehezina. Ny fandaharan'asa dia manana fitaovana marobe ho an'ny fanitsiana loko sy fanitsiana sary fototra. SumoPaint dia azo ampiasaina hanoloana Ps ho an'ny Mac.
AMPIASAO KRITA MAIMAIMPOANA
Fitaovana fanaovana sary nomerika matihanina
Fitaovana fanamboarana sary tsy voavolavola
Krita dia tonian-dahatsoratry ny sary misokatra ary fanoloana maimaim-poana Photoshop CS2 ho an'ireo izay mila fitaovana fanaovana sary nomerika fototra matetika. Noderaina i Krita noho ny fifantenana be dia be amin'ireo fitaovana mitovy amin'izany miaraka amin'ireo endri-javatra mahazatra, toy ny sivana, ny vokany, ny fanesorana lesoka, sns.
Fitaovana lehibe ho an'ny sary vector
Inkscape dia safidy tsara amin'ny Photoshop CS2 Mac, natao hamoronana sary ara-javakanto sy ara-teknika. Ny fitaovana dia mamela anao hamerina sary, mamorona logos na sora-baventy, mampiasa borosy samihafa. Ny programa dia mety amin'ny fanatanterahana asa sary vector rehetra ihany koa.
Mifanaraka amin'ny Linux
Fitaovana matihanina amin'ny fanamboarana sary
GIMP dia tonian-dahatsoratry ny sary open-source feno. Manana endri-javatra maro amin'ny Photoshop izy io, toy ny fitaovana fanamboarana sary, fanatsarana ny hazavana, miasa amin'ny sosona, saron-tava, sns.
Mba hanombohana manova sary ao amin'ny Photoshop CS2 amin'ny fomba mety, dia manoro hevitra aho ny hampiasa hetsika sasany aseho eto ambany. Vokatr'izany dia ho lasa miavaka sy tsara tarehy kokoa ny sarinao.
Ampidino maimaim-poana ny Photoshop CS2
Misintona Photoshop CS2 maimaim-poana ho an'ny Mac/Win/Linux
Ampidiro Photoshop CS2 kinova maimaim-poana hijerena ireo endri-javatra miavaka rehetra amin'ity programa ity. Hianatra ny fomba hamoronana tetikasa mahaliana anao ihany koa ianao.
Photoshop CS2 tombony